Vamwe vashandisi vanogunun'una nezve bhatiri reApple Watch neWatchOS | Ndinobva mac
Vamwe vashandisi vanogunun'una nezve bhatiri reApple Watch neWatchOS
Tinogona kutaura kuti vazhinji ndivo vashandisi izvozvi izvozvi mune yazvino vhezheni inowanikwa yewatchOS, mune ino kesi watchOS 6.2 uye kune vamwe zvakare vashandisi vangave vari kunyunyuta nezve kudonha kwekuita mukuzvimiririra kwechigadzirwa. Izvi, sezvazviri muzvinhu zvese, hazvisi padanho rechokwadi uye ichokwadi kuti vazhinji vevashandisi vari kunyunyuta nezve kudzikira kwekuzvitonga ndevaya vane unr Apple Watch Series 4 kana apfuura, idzo dzeSystem 5 nyowani zvinoita kunge dzisina matambudziko ebhatiri.
Iyo Apple Watch inowanzo kupa kuzvitonga nekushandisa zvine mwero kwezuva nehafu kana maviri, zvinoenderana nezvakawanda pazvinhu zvinoverengeka. Mune ino kesi, zvinoita sekunge iyo nyowani vhezheni yeWOSOS inoita kuti mawachi arasikirwe nekuzvimiririra kana ichienzaniswa neshanduro yapfuura uye vashandisi vanonyunyuta zvakanyanya ndevaya vane Nyaya 2, 3 kana 4. Rangu ruzivo rwunondiudza kuti rimwe bhatiri rinogara rakarasika nekuda kwezvinhu zviri pachena zvekupfeka kwechigadzirwa uye kuti kana tangozvivandudza inogona kuve nyaya yemazuva kuti zvese zvinogadzikana zvakare nemaitiro nevamwe, asi dzimwe nguva hazvisi.
Chinhu chinonakidza mupfungwa iyi ndechekuti kusvika kweshanduro nyowani kunogara kuchiunza maficha matsva mukushanda, zvikanganiso zvinogadziriswa uye matambudziko akaonekwa anogadziriswa, kunyangwe chiri chokwadi kuti mune dzimwe nguva shanduro nyowani dzinogona kutungamira mukushandisa kukuru kwebhatiri. , asi kwete zvakajairwa. Zvichemo zvevashandisi vanoona yakakwira yekushandisa inopesana yakanangana neavo vanodaro neshanduro nyowani vane kuzvitonga kuri nani, icho chinhu chinodzokororwa mune idzi kesi.
Uye iwe, unoona yakakwira bhatiri kunwa pane yako Apple Watch kubva pawakaisa watchOS 6.2?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Vamwe vashandisi vanogunun'una nezve bhatiri reApple Watch neWatchOS
Amazon Music haichadi kuti Prime inzwike
Tarisa yako Mac maitiro neichi chishandiso